Manchester City Oo Guul Muhiim Ah Ku Furatay Horyaalka Premier League & Gunners Oo Emirates Stadium Ku Guuldareysatay. - Laacib.net
Manchester City Oo Guul Muhiim Ah Ku Furatay Horyaalka Premier League & Gunners Oo Emirates Stadium Ku Guuldareysatay.
12-08-2018 Abdirashid Mohamud "SHarDinHO" Comments Off on Manchester City Oo Guul Muhiim Ah Ku Furatay Horyaalka Premier League & Gunners Oo Emirates Stadium Ku Guuldareysatay.
Laba gool oo ay kala dhaliyeen Raheem Sterling iyo Bernardo Silva ayaa guul siiyay difaacdayaasha horyaalka Premier League, kulankii ay Emirates Stadium kula ciyaareen Arsenal, tababare Guardiola ayaana guuldaradii ugu horreysay dhadhansiiyay Unai Emery.
Manchester City waxey ku bilaabatay si daganaan ah iyadoo ah koox marti ku ah Emirates Stadium, iyadoo Guardiola uu keydka dhigay dhawr ciyaartoy oo shaxdiisa koowaad muhiim u ahaa fasalkii lasoo dhaafay.
FURSAD: Daqiiqadii 2-aad: Aaron Ramsey ayaa bilowgii ciyaarta helay fursad uu gool ugu dhaliyo kooxdiisa, balse kubadii uu goolka aadiyay waxaa ku dhagay Ederson.
BADBAADO: Daqiiqadii 9-aad: Sergio Aguero ayaa kubad u gudbiyay Raheem Sterling, xiddiga reer England si qurux badan ayuu laba xiddig ugu gooyay ka hor inta uusan lugta bidix goosha ku aadin kubad xoogan, Petr Cech ayaa badbaadiyay.
GOAL: Daqiiqadii 14-aad: Raheem Sterling ayaa shabaqa soo taabsiiyay gool cajiib leh, tiro badan oo ciyaartoyda Gunners ah ayuu si gees orod ah u dhaafay ka hor inta uusan kubad awood leh shabaqa ku tuurin.
HALIS: Daqiiqadii 24-aad: Goolhaye Petr Cech ayaa u dhawaaday inuu gool iska dhaliyo kadib markii xiddiga da’da yar ee Guendouzi uu kubad gadaal u celiyay.
BADBAADO: Daqiiqaii 28-aad: Petr Cech ayaa badbaadiyay kubad laad xor aheyd oo ka timid Riyad Mahrez, mar kale waxaa fursad helay Laporte hadana wuu ka badbaadiyay.
FURSAD: Daqiiqadii 34-aad: Ciyaartoyda Arsenal ayaa abuuray weerar aan caadi aheyn, Ramsey ayaa kubad ku simay Ozil kaas oo isna si sahlan ugu dhiibay Mkhitaryan, balse daafaca Citizens ayaa fashiliyay.
Qeybta hore ciyaarta waxey ku dhamaatay 1-0, oo ay ku hogaamineyso Manchester City – kooxda difaacaneysa horyaalka ayaana si ka fiican dhigeeda u ciyaartay qeybtii hore, mar kalana qeybta labaad si wanaagsan ku bilaabatay.
BADBAADO: Daqiiqaii 63-aad: Serio Aguero ayaa helay kubad hal iyo hal ah, wuxuu ka hortagay goolhaye Petr Cech, balse si cajiib leh ayaa looga badbaadiyay.
GOAL: Daqiiqadii 64-aad: Bernardo Silva ayaa shabaqa soo taabsiiyay kubad awood badan, kadib markii Mendy uu banaanka soo dhigay kubad fudud, xiddiga reer Portugal wuxuu dhaliyay goolkiisii ugu horreeyay horyaalka fasalkaan.
Gunners waxey soo bandhigeen qeybahii dambe ciyaarta bandhig aan caadi aheyn, maadaama ay cadaadis fiican saareen Citizens, balse kama miradhalin, mana sameynin weeraro xad dhaaf ah oo qalqal weyn galiyay goolhaye Ederson Maores.
Natiijada ciyaarta waxey kusoo dhamaatay 2-0, oo ay guusha ku raacday Manchester City, kooxda difaacaneysa horyaalka ayaana guul awood ku dheehan ku furatay fasal ciyaareedka cusub.